C/xakiim Axmed Guuleed oo loo magacaabay wasiirka warfaafinta Puntland. – Radio Daljir
C/xakiim Axmed Guuleed oo loo magacaabay wasiirka warfaafinta Puntland.
Garowe, Dec 15 – Degreeto xalay ka soo baxday xafiiska m/weynaha dawladda Puntland Dr. C/raxmaan Sheekh Maxamed ?Faroole? ayaa lagu magacaabay wasiirka warfaahinta Puntland.
Degreetadaan oo lambarkeed ahaa 110, ayaa lagu magacaabay wasiirka warfaafinta dawladda Puntland waxaana xilkaasi loo magacabay C/xakiim Axmed Guuleed, oo noqon doona wasiirka cusub ee warfaafinta Puntland kadib markii bishii August ee sanadkaan la dilay wasiirkii hore ee warfaafinta Puntland alle ha u naxariistee Warsame Cabdi Shirwac ?Saafta Banaanka?.
Warqadda lagu magacaabay mas?uulkaan cusub kana soo baxday xafiiska m/weynaha ee magaalada Garoowe, ayaa lagu sheegay magacabistiisu in ay timid kadib markii m/weynuhu uu dib u eegay dartuurka Puntland gaar ahaan qodobada ogolaanaya magacaabista golaha wasiirrada, isla markaana uu arkay aqoonta, waayo aragnimada iyo kartida uu mas?uulkaani u leeyahay xilka loo dhiibay ee warfaafinta Puntland.
Wasiirka haatan la magacaabay ee warfaafinta Puntland C/xakiim Axmed Guuleed, waa nin ku cusub siyaasadda Puntland, waxaana xilliga la magaacay uu ku sugnaa dalka dibaddiisa gaar ahaan magaalada Nairobi ee wadanka Kenya.
Jagada wasiirka warfaafinta Puntland ayaa in muddo ahba ahayd mid bannaan kadib markii toogasho lagu dilay wasiirkii hore ee warfaafinta Puntland Bartamihii sanadkaan gudaha magaalada Galkacyo.